#JoseOut Oo Qabsatay Baraha Bulshada & Jamaahiirta Tottenham Oo Dalbaday In La Caydhiyo Jose Mourinho - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha Maanta#JoseOut Oo Qabsatay Baraha Bulshada & Jamaahiirta Tottenham Oo Dalbaday In La Caydhiyo Jose Mourinho
#JoseOut Oo Qabsatay Baraha Bulshada & Jamaahiirta Tottenham Oo Dalbaday In La Caydhiyo Jose Mourinho
Jamaahiirta kooxda kubadda cagta Tottenham ayaa dalbaday in shaqada laga caydhiyo tababare Jose Mourinho kaddib markii ay soo dhamaatay ciyaartii Everton ee xalay.
Tottenham ayaa barbarro 2-2 ah la gashay Everton oo ay ugu tagtay Goodison Park, waxaanay kusii negaatay kaalinta toddobaad ee miiska kala-sarraynta, taas oo ay uga horreyso guul-darro ay usbuucii hore kala kulmeen Manchester United oo ku garaacday garoonkooda Tottenham Hotspur Stadium.
Tottenham ayaa dhibco lumisay kulankii saddexaad oo xidhiidh ah, waxaana barbarraha Everton iyo guul-darrada Manchester United uga sii horreysay Newcastle United oo natiijo la mid ah tii Everton ku qabatay. Waxa kale oo u raacday in kooxda Dynamo Zagreb ay ka reebtay tartanka Europa League wareeggii 16ka.
Fursadda ay Tottenham ugu gudbi karayso tartanka Champions League ayaa gabaabsi noqonaysa, waxaanay ku jiraan kaalin ay adag tahay in ay hiigsadaan kooxaha ka horreeya xilli dhamaad uu ku dhow yahay horyaalku.
West Ham United oo ku jirta kaalinta afraad, walina aan ciyaarin ayaa Tottenham ka horreysa shan dhibcood, waxaana haddii ay badiso ay tegi doontaa siddeed dhibcood, taas oo quus ka dhigi doonta Jose Mourinho iyo xiddigihiisa.
Jamaahiirta Tottenham ayaa hadda samirkii ka dhamaaday, waxaanay dalbanayaan in shaqada laga caydhiyo Jose Mourinho oo xataa aan lala sugin inta uu xilli ciyaareedku dhamaanayo.
Tottenham oo toddobaadka dambe finalka Carabao Cup la ciyaari doonta Manchester City, ayaanay taageereyaashu rajo badan ka qabin, in Mourinho uu awood u yeelanayo in uu koobkaas u qaado, iyagoo daliil ka dhiganaya natiijada kulankii ugu dambeeyey ee Man City ay ku garaacday.
Dhamaadka ciyaartii Everton ee xalay, waxa baraha bulshada gaar ahaan Twitter-ka isqabsaday farriimo ay calaamad u ahayd #JoseOut oo ay taageereyaasha Tottenham ku dalbanayeen in shaqada laga caydhiyo tababare Mourinho.
Jamaahiirta ayaa eedaymo ugu jeedinaya tababarahooda in kooxdoodu ay kaalinta toddobaad ku jirto oo ay sannad kale ka maqnaanayso tartanka Champions League, iyagoo haysta 50 dhibcood, halka markaana hal dhibic kaliya ka sarreeya kooxda kaalinta siddeedaad fadhida ee Everton oo ciyaari baaqi u tahay.